Qurxinta iyo daryeelka jirka Giriiggii hore | Safarka Absolut
Qurxinta iyo daryeelka jirka Giriiggii hore
Iyadoo la raacayo qawaaniinta falsafadii hore ee qadiimiga ahayd, dhaqankii Griiggu wuxuu la socday qurux iyo daryeelida jidhka. Waqtigaas, isku mid ahaanshaha muwaadin wanaagsan wuxuu lahaa jir sifiican loo daryeelay oo si wanaagsan loo tababaray. Ragga jimicsiga saacado ayey ku jimicsanayeen jimicsi si ay u gaaraan himilada qadiimiga ah ee quruxda ee ku saleysan wada noolaanshaha iyo jir dhiska.
Griiggu, marka lagu daro inay jirkooda ku hayaan xaalad jireed oo wanaagsan iyada oo loo marayo barnaamij jimicsi oo xoog leh, sidoo kale waxay aad uga taxadireen nadaafada shaqsiga. Kadib jimicsi jimicsi, waxay raaceen dhaqan nadiifinta maqaarka ah illaa heer u rogaya cibaadada quruxda mid ka mid ah tiirarka dhaqankooda, taas oo saameyn ku yeelatay ilbaxnimada kale.
Qodobkaan waxaan dib u eegnay waxa qurxinta iyo daryeelka jirku ka koobnaayeen Giriiggii hore. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato? Sii wad akhriska!
1 Musqusha Giriiggii hore
2 Maydhashada dadweynaha ee Giriiggii hore
3 Haweenka ku jira maydhashada dadweynaha ee Athens
4 Ku habboonaanta quruxda dumarka ee Giriiggii hore
5 Daryeelka timaha waqtiyadii hore
6 Timo ka saarista adduunka qadiimiga ah
7 Dhaqanka qurxinta ee dhaqamada kale
Musqusha Giriiggii hore
Waxaan ku arki karnaa sawir gacmeedka amphoras ee ilaa maanta jira Giriiggii hore waxay aad uga taxadari jireen inay yeeshaan jidh isu dhigma oo caafimaad qaba, sidaa darteed waxay mariyeen barnaamijyo jimicsi dalbanaya si loo gaaro jir is waafajinaya oo qurux badan.
Ciyaaraha 'amphoras' ciyaartooyda looma matalin kaliya ku celcelinta isboortiga laakiin sidoo kale waxay ku dhaqmayeen caadada nadaafadda iyo daryeelka jirka ka dib. Oo waxaa lagu rinjiyeeyay waxyaalahooda quruxda badan, tusaale ahaan weelasha yaryar ee saliidaha udgoonku ka laalaadaan darbiyada ama ku xidhaan curcurka ciyaartoyda.
Dambaska, ciidda, dhagaxa buluugga iyo soobax, yicibta, marjoram, lavender iyo salinam qorfe ayaa loo isticmaalay in lagu nadiifiyo maqaarka jimicsiga ka dib. sida looshinada la nadiifiyo, caloosha iyo urta carfa. Qalab kale oo ay isticmaali jireen wuxuu ahaa bir dheer oo qaab eg u eg si ay boodhka iyo saliidda saa'id ah uga saaraan maqaarka.
Matxafka qadiimiga ah ee Giriigga waxaad ku arki kartaa qaar ka mid ah muunadaha dhalooyinka loo adeegsaday in lagu kaydiyo nuxurkan iyo alaabada nadiifinta Waxay ahaayeen weelal ka samaysan dhoobo ama alabastar loo qurxin jiray oo leh qaabab kala duwan.
Maydhashada dadweynaha ee Giriiggii hore
Waxaa la ogyahay in maydhashada dadweynaha ay ka jireen Athens ilaa qarnigii XNUMXaad ee dhalashadii Ciise ka hor, meelaha raggu aaday jimicsiga kadib kaliya maydhashada laakiin sidoo kale inay la sheekeystaan ​​isticmaaleyaasha kale, maadaama loo tixgeliyey inay yihiin goobo caan ah oo lagu kulmo.
Meelaha lagu maydho ee Giriiggii hore waxay ahaayeen goobo ballaadhan oo qabta boqolaal qof waxaana loo qaybiyay dhowr meelood. Marka hore waxaad marin frigidarium (qol biyo qabow leh oo lagu maydho lagana saaro dhididka), markaa waxay ahayd markiisa tepidarium (qol biyo diirran leh) ugu dambayntiina waxay aadeen dhinaca kaldarium (qolka leh sawnada).
Dhakhaatiirtii waqtigaas waxay ku taliyeen in la maydhasho biyo qabow maxaa yeelay waxay dib u soo nooleeyeen jirka iyo nafta iyadoo qubayska kulul loo isticmaali jiray in maqaarku u ekaado mid siman oo qurux badan.
Markay dhaqankii maydhashada dhammaatay, adeegeyaashu waxay ka saareen wasakhdii ka soo baxda maqaarkooda oo way siibeen. Kadibna masarradii ayaa soo dhex gashay, kuwaas oo saliidaha udgoon ku mariyey jirkooda si ay u nastaan ​​muruqooda.
Haweenka ku jira maydhashada dadweynaha ee Athens
Meelaha lagu maydho ee Giriiggii hore waxaa ku yaal goobo si gaar ah loogu talagalay haweenka, in kasta oo ay tagi jireen dadka Athenia ee hooseeya maadaama dumarka dabaqadda sare ah lagu maydho guryahooda. Maydhiska waxay u isticmaali jireen berkado ama dhagxaanta dhagxaanta dhagxaanta oo ay gacmaha biyo kaga buuxsameen.
Ku habboonaanta quruxda dumarka ee Giriiggii hore
Ereyga la isku qurxiyo wuxuu ka yimid Griigga oo macnihiisu yahay "wixii loo isticmaalo nadaafadda iyo quruxda jirka" gaar ahaan ula jeedka wejiga.
Astaanta quruxda ee dumarka Griiggu waxay ahayd qurux aan macquul ahayn. Maqaarka cad waxaa loo tixgeliyey inuu yahay mid ka tarjumaya daahirnimo iyo xamaasad iyo sidoo kale nolol maalqabeen ah maadaama maqaarka maqaarka laga aqoonsaday fasallada hoose iyo addoommada, kuwaas oo saacado badan qorraxda ku shaqeynayay.
Si loo ilaaliyo maqaarka cirro leh, waxay isticmaali jireen alaabada sida nuuradda, qalinka ama arsenic. Waxay dhajiyeen dhabannada midabkeedu saleeban yahay, in kasta oo ay ahayd qurxiyo aad u fudud maadaama quruxda dabiiciga ahi adkaatay, oo aan ka duwanayn dumarka shirkadda isticmaala midabbo aad u daran.
Daryeelka timaha waqtiyadii hore
Sida timaha, rag iyo dumarba timahoodu saliid bay ku mariyeen saliid wayna duubteen maxaa yeelay qaabkani waxaa loo tixgeliyey inuu yahay kii ugu weynaa ee soo saara quruxda wakhtigaas. Griiggu waxay jeclaayeen dhaqdhaqaaqa lagu muujiyey hirarka iyo curlsyada. Addoommadu waxay mas'uul ka ahaayeen inay timaha sayidyadooda ku hayaan xaalad kaamil ah. Xaqiiqdii, qaar ka mid ah timaha timaha ay xidhaan Giriiggii hore ayaa lagu arki karaa taalooyinka ilaa maanta jira.
Haweenka ka tirsan fasalada sare waxay kaga duwanaayeen addoomada timahooda maxaa yeelay waxay xirnaayeen timo casri ah waxayna ku soo aruursadeen timahooda dhaadheer qaansooyinka ama xargaha lagu qurxiyay qaansooyinka iyo xargaha yar. Kaliya waqtiyada baroor-diiqda ayay yara gooyeen. Dhankooda, haweenka dabaqadda hoose waxay timaha u gashanaayeen gaagaaban.
Carruurta waxaa loo oggolaaday inay timahooda koraan illaa qaan-gaarnimada, markii laga jaray inay u fidiyaan ilaahyada. Raggu marmar ayey aadaan tima jaraha mana bilaabin inay xiiraan garka iyo shaarubaha ilaa Alexander the Great kadib. Mid kale oo ka mid ah hal-abuurnimada la timid Boqorka Macedonia ee ka dhalatay qabsashadiisii ​​Bariga wuxuu ahaa dheeh timo.
Giriiggii hore midabka timo cad wuxuu astaan ​​u noqday quruxdeeda buuxda. Si aad ugu ekaato Achilles iyo geesiyaal kale oo ku takhasusay quraafaadka Giriigga, raggu waxay hindiseen habab timaha lagu iftiimiyo iyadoo la adeegsanayo alaab ay ka mid yihiin khal, liin dhanaan, iyo saffron.
Timo ka saarista adduunka qadiimiga ah
Si looga saaro timaha jirka, haweenku waxay isticmaaleen mandiillo waxayna ku dhajiyeen macmacaan gaar ah ama shumaca.. Giriiggii hore waxay u arkeen inay aad muhiim u tahay in gebi ahaanba laga saaro timaha jirka maadaama jir daatay uu astaan ​​u ahaa dambi la’aan, dhalinyaro iyo qurux.
Wax-soo-saarka ayaa lagu kaashaday duugis leh saliid iyo cadar si maqaarka loo dajiyo. Caadadan waxaa lagu fuliyay kosmetés ee jimicsiga, kuwaas oo si uun u ahaa horudhacyada qurxinta qurxinta.
Dhaqanka qurxinta ee dhaqamada kale
Markii ay ka adkaadeen Byzantium, Masar iyo Suuriya, muslimiintu waxay jacaylka qubayska uga dhaxleen Roomaankii iyo Masiixiyiintii Byzantine.
Markii hore, dhaqanka Islaamka waxaa loo haystay in kuleylka hammam uu kordhiyo bacriminta iyo, sidaas darteed, taranka mu'miniinta. Marka Carabtu waxay joojiyeen inay isticmaalaan biyaha qaboojiyaha (qolka qabow) si ay u maydhaan oo kaliya waxay isticmaali jireen tepidarium iyo caldarium.
Marka wadamada carabta, hammaamku sidoo kale waxay ahaayeen goob muhiim ah oo lagu kulmo bulshada wuxuuna istaagay irdaha masaajida. Marinkiisa dhexdooda wuxuu u maleynayay inuu yahay diyaarin iyo daahirin si uu u galo macbudka.
Nasiib wanaag, Dhaqankan loogu talagalay qurxinta ee ku dhashay Giriiggii hore oo ay ilaalinayeen waddamada Islaamka ayaa ilaa maanta jira. Magaalooyin badan waxaa ku yaal maydhashooyin Carab ah oo aad kala kulmi karto dhaqankan soo jireenka ah maqaarkaaga. Waa qorshe fantastik ah inaad kubixiso galabtii usbuuca, nasasho iyo nasasho jir iyo maskaxba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Qurxinta iyo daryeelka jirka Giriiggii hore
Waad salaaman tahay, sidee tahay waxaad moodaa wax aad u wanaagsan inaad ka hadasho arintan
Ku jawaab gshcgzc
Fasaxa Maraakiibta: Rumayntaada oo dhan Rumayso!